कस्ता नकारात्मक एसईओ त्यहाँ छन्?
हामीले एसईओ कसरी काम गर्ने काममा delving सुरु गर्नु अघि, हामी कुन एसईओ वास्तवमा नकारात्मक छ भनेर परिभाषित गर्छौं.
नकारात्मक एसईओ को प्रकृति
बस राख्नुहोस, नकारात्मक एसईओ चुपचाप गतिविधिहरु को एक सेट हो जुन उद्देश्य को परिणामहरुमा तपाईंको रैंकिंग को कम गर्न को लागी. तपाईंको वेबसाइटको विरुद्ध लिने यो दुर्भावनापूर्ण प्रयास सामान्यतया अफ-पेज हो, यसको अर्थ अप्ठ्यारो लिंक तपाईंको साइटमा निर्माण वा तपाईंको साइटको सामग्री पुन: पोस्ट गर्दै.
यद्यपि नकारात्मक एसईओ अचानक रैंकिंग ड्रपहरूको सामान्य कारण होइन, यो तपाईंको लागि राम्रो छ कि तपाइँ कसरी जान्नको लागि परिभाषित गर्नुहोला कि तपाईले आफ्नो रैंकिंग जानबूझेर चोट पुर्याइरहेको छ भने.
नकारात्मक अफ-पृष्ठ एसईओ
नकारात्मक अफ-पृष्ठ एसईओ एसईओलाई बुझाउँछ जुन तपाइँको वेबसाइटमा आन्तरिक हस्तक्षेप बिना यो लक्ष्य छ।. यहाँ सबै भन्दा साधारण आकारहरूको नकारात्मक सूची-पृष्ठ एसईओ ले लिन्छ:
त्यहाँ एउटा सानो मौका छ कि एक जोडीले कडा लिङ्कहरू तपाईंको मार्नेछन्। साइट रेजिङ. तथापि, जब यो खेती लिंक गर्न आउछ, त्यसपछि आक्रमणको संभावना बढेको छ.
एक नियमको रूपमा, ती ह्याकर लिङ्कहरूमध्ये अधिकांश उस्तै एङ्कर पाठ प्रयोग गर्छन्. यी मिल्दो एंकर्सले आक्रमणको बेला वेबसाइटमा सम्बद्ध हुन सक्छ वा स्रोतको लिंक प्रोफाईल जस्तै मालिकले यसलाई हेरफेर गर्नको लागि लक्षित लक्ष्यीकरण समावेश गर्न सक्छ।.
यस्तो आक्रमणका लागि रोक्न नियमित रूपमा तपाईंको लिङ्क प्रोफाइल विकास जाँच गर्नुहोस्.
एसईओ जासूस उपकरणले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ किनकि यसले तपाईंलाई दुवैको लागि प्रगति ग्राफ दिन्छ:
सन्दर्भ डोमेनहरूको संख्या; (2 9)
तपाईंको प्रोफाइलमा लिङ्कहरूको संख्या. (2 9)
यी दुइटा घटनाहरु मध्ये कुनै पनि असामान्य स्पाइक तपाईले भर्खरै प्राप्त गर्नुभएको लिंकहरूमा हेर्नु भएको कारण हो।.
अन्य तरिका प्रतियोगिहरु तपाईंको रैंकिंग बर्बाद गर्न सक्छन् अन्य वेबसाइटहरु मा तपाईंको सामाग्री स्क्यान गर्न र प्रतिलिपि गरेर. यो निम्नानुसार कार्य गर्दछ: जब खोज इञ्जिन बहुविध वेबसाइटहरूमा समान सामग्री फेला पार्दछ, यो श्रेणीमा केवल एउटा संस्करण छान्दछ. यद्यपि खोज इञ्जिनहरूले चाँडो मौलिक संस्करणको पहिचान गर्छ, त्यहाँ प्रायः अपवादहरूको लागि कोठा हो.
यदि तपाइँ निश्चित हुनुपर्दछ कि तपाईंको सामग्री अन्य साइटहरू द्वारा डुप्लिकेट गरिएको छैन भने, तपाइँ यसलाई राम्रो तरिकाले प्रतिलिपिको प्रतिलिपि उपकरणको साथ जाँच गर्नुहुन्छ जुन सामग्री डुप्लिकेटका उदाहरणहरू पूर्ण रूपमा निर्धारण गर्दछ।. घटनामा तपाईंले आफ्नो सामग्रीको स्क्रैप गरिएको प्रतिलिपि फेला पार्नु भएको छ, वेबमास्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र टुक्रा हटाउन सोध्नुहोस्.
नकारात्मक ओन-पृष्ठ एसईओ
नकारात्मक पृष्ठ-पर-क्लिक एसईओ आक्रमणहरूले तपाइँको वेबसाइटमा हैकिंग र वरपर परिवर्तन गर्ने चीजहरू समावेश गर्दछ।. अफ-पृष्ठ एसईओ आक्रमणहरू भन्दा लागू गर्ने तरिका हो. मुख्य एसईओ खतराहरू एक हैकर आक्रमण गर्न सक्छन्:
निम्न रणनीतिलाई स्पट गर्न गाह्रो छ।. सामान्यतः, हैकरले साइटमा स्प्यामी सामग्री थप्छ. ती लिङ्कहरू प्राय: लुकेका हुन्छन् किनकि, तपाईंले कोड देख्न नसक्दा तपाईंले तिनीहरूलाई देख्न सक्नुहुन्न.
एक अधिक सम्भावित नकारात्मक एसईओ परिदृश्य हो जब हमलावरले तपाइँको पृष्ठहरू परिमार्जन गर्दछ, उनीहरूलाई वेब पेजमा पुन: निर्देशित गर्दै. केहि साइट मालिकहरूले यो विधिको प्रयोग गर्नका लागि आफ्नो आफ्नै साइटको पेजरङ्क बढाउन वा प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाइँको साइटमा रिडिरेक्ट गर्न जब तिनीहरू तपाईंको पहुँच गर्न प्रयास गर्छन्. यदि खोज इञ्जिन तपाईले गर्नु अघि पुन: निर्देशित बारे पत्ता लगाउँदछ भने, तिनीहरू सम्भावित वेबसाइटमा रिडिरेक्टिङको लागि तपाइँको स्रोतलाई दण्डित गर्न सम्भव छ।. WebSite लेखा परीक्षक जस्तै समाधानको साथ नियमित साइट लेखा परीक्षण यो आक्रमणको स्थान निर्धारण गर्ने उत्तम विकल्प हो.
तपाईंलाई आश्चर्यचकित हुन सक्छ, तर रोबोटको रूपमा यस्तो फाइलमा सानो परिवर्तन. txt तपाईंको सम्पूर्ण एसईओ मार्केटिंग रणनीति खराब गर्न सक्छ. एक अस्वीकरण नियम सबैले तपाईंको संसाधन पूरै स्रोतलाई बेवास्ता गर्नको लागि खोजी इन्जिनलाई बुझाउँछ. दुखद तर सत्य.
सौभाग्य देखि, त्यस्ता अभ्यासहरू रोक्न तपाईं केहि गर्न सक्नुहुन्छ. नियमित मूल्याङ्कन जाँचले तपाईंलाई मद्दत गर्न पहिलो हुन मद्दत गर्नेछ तपाईंको संसाधनले de-indexed प्राप्त गर्नुपर्छ. श्रेणी ट्रयाकर एक उत्कृष्ट उपकरण हो जुन तपाईं अनुसूचित स्वचालित चेकहरूमा लागू गर्न सक्नुहुनेछ. क्षण तपाईको साइट अचानक Google को नतिजाबाट बिसाउँदछ, तपाइँ फरक स्तम्भमा एक ध्वनी नोट देख्नुहुनेछ. त्यो जस्तो सरल Source .